CAB Isixhobo sokulungisa. Lungisa urhwaphilizo CAB Iifayile.
DataNumen CAB Repair Ingaba i eyona CAB isixhobo sokubuyisela emhlabeni. Inokulungisa urhwaphilizo CAB Oovimba abagcina kuvimba kunye nokubuyisa idatha yakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela kuncitshiswa ilahleko kurhwaphilizo lwefayile.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,465)
Ngoba DataNumen CAB Repair?
Kwakhona, enkosi nge
NgoJan 17, 2019
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen CAB Repair v2.4
Inkxaso yokulungisa lonke uguqulelo lweMicrosoft cabiifayile ze-inet.
Inkxaso yokulungisa CAB iifayile zixinaniswe ne-MSZIP, LZX kunye neendlela zeQuantum.
Inkxaso yokulungisa CAB iifayile kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, njengediski yefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa ibatch ye CAB iifayile.
Nika istub se-ExE kwaye ukhuphe ifayile yeSFX xa kufanelekile.
Inkxaso yokufumana nokukhetha ifayile ye CAB iifayile eziza kulungiswa kwikhompyuter yomthengi.
usebenzisa DataNumen CAB Repair Ukufumana kwakhona i-MS eyonakeleyo CabIndawo ezigciniweyo zoVimba
Xa iMicrosoft yakho cabindawo yokugcina inet (.CAB iifayile) zonakalisiwe okanye zonakele kwaye ngekhe uzivule ngokwesiqhelo, ungasebenzisa DataNumen CAB Repair ukuskena ifayile ye.CAB iifayile kunye nokufumana kwakhona idatha kwiifayile kangangoko kunokwenzeka.
Phawula: Ngaphambi kokufumana kwakhona ukonakala okanye ukonakala CAB Iifayile nge DataNumen CAB Repair, nceda uvale naziphi na ezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile ye- CAB ifayile.
Khetha eyonakeleyo okanye eyonakeleyo CAB ifayile eza kulungiswa:
Ungafaka igalelo CAB igama lefayile ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile. Unokucofa kwakhona iqhosha lokufumana CAB Indawo yokugcina eza kulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Ngokuzenzekela, DataNumen CAB Repair iya kugcina i-fixed CAB ifayile kwifayile entsha enegama elithi xxxx_fixed.cab, apho i-xxxx ligama lomthombo CAB ifayile. Umzekelo, kumthombo CAB ifayile yonakele.cab , igama elingagqibekanga lefayile emiselweyo iya konakaliswa -Fixed.cab. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen CAB Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa imvelaphi CAB ifayile. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba ngaba umthombo CAB ifayile inokulungiswa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Ngoku ungavula i-fixed CAB fayile ngo-WinZip, PhumelelaRAR okanye ezinye iinkqubo ezixhasa CAB iifayile.
DataNumen CAB Repair 2.4 ikhutshwa nge-21 kaDisemba, 2020
DataNumen CAB Repair 2.2 ikhutshwa nge-5 kaNovemba ngo-2020
DataNumen CAB Repair 2.1 ikhutshwa nge-23 kaJanuwari, 2019
Inkxaso yeWindows 8.1 kunye ne-10.
DataNumen CAB Repair 2.0 ikhutshwa ngo-Novemba 9, 2013